Ternopil - Isifundo e-Ukraine. Ukrainian Ukwamukelwa Center
Faka isicelo ku-inthanethi
Ternopil ingenye lamadolobha amakhulu zasentshonalanga ye-Ukraine, akhiwe enhliziyweni yayo nokuba isimo yohwebo elaliyisikhungo esibalulekile. It is a ethule, idolobha emangalisayo obuluhlaza simo esiyingqayizivele, umlando egqamile kanye plethora yemvelo ezithakazelisayo, nokuzwa zomlando kanye lathumela.
Igama Ternopil, Ngokwencwadi ethile tale, evela ibinzana “ternovoye polye” (ngokoqobo, "Insimu blackthorn"), ngoba izihlahla blackthorn ukuthi zazivame ukutshala lapha. Enye legend uthi umuzi yethiwa umsunguli wayo, Grand Crown Hetman uJan Tarnowski. Nguye, ngemuva kokuthola incwadi evela umbusi Polish Sigismund I-Old ebiza umuzi wawuyomiswa, wakha inqaba enezivikelo eziqinile lapha ngekhulu le-16.
NgeNkathi Ephakathi, Ternopil wema ezimpambanweni zomgwaqo kuyo imizila yohwebo ebalulekile, ekubeni elaliyisikhungo esibalulekile kwezentengiselwano. Umuzi elaliyingxenye yoMbuso wase-Austro-Hungarian kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-18, kodwa emva kokuphela the World War I, yayibuya Poland. In 1939, Ternopil waba yeSoviet Union, futhi, kusukela 1991, ezimele Ukraine.
iphuzu Umuzi eziyinhloko of interest ibhekwa njengendawo Old Castle, Umlando ogama waqala cishe 500 iminyaka edlule. It iyona endala ukwakhiwa elisasele e Ternopil. Nakuba le nqaba kwaba lwesivikelo ukuzivikela, it wayengeke aphunyule umonakalo wempi: Fort wajeziswa izikhathi eziningana, kodwa yabuye yakhiwa kabusha kaninginingi. Ekhulwini le-19, enqabeni eyaphenduka yaba classicist esigodlweni Russian, namasosha asele yayo bhubhisa. Namuhla, kukhona udonga lwamatshe ngapha amasango ahlotshiswe kakhulu izungeza esigodlweni.
Phakathi kwamagugu wezakhiwo ezinikeza Ternopil ukubukeka kwalo inimitable, EDominican Church ufanelwe isizathu esikhethekile sokuba kukhulunywe. Yakhiwa ngekhulu le-18 ngasekupheleni kwawo isitayela Baroque, imibhoshongo yalo nenhle avuke mlando city centre. Eduze zesonto kumi Dominican izindela 'zokuhlala. Ezikhathini Soviet, ibandla yaphenduka gallery isithombe; kuba manje asebenzayo waphinda.
Kodwa ngisho izakhiwo ngaphezulu zasendulo sacral iphila emizini engekho Ternopil. Omunye sezakhiwo zokuhlobisa kunazo zonke kuleli dolobha elidala sika Church of Ekuphakanyisweni Wesiphambano, wakha ekuqaleni kwekhulu le-16 ensimini ka lasendulo Kyivan Rus ethempelini. Ngaleso sikhathi, ke wayevame ukuthunywa ukuba avikele umuzi. Akukhona kuphela isakhiwo endala kunazo zonke e Ternopil, kodwa futhi lowo esiyinqaba, njengoba ibandla alinaso domes. Okusanda, isonto wabuyiselwa futhi yabizwa ngokuthi i- “Church Pond. "ISonto elisencwadini yasendulo Ukuzalwa KukaKristu, eyasungulwa ngo 1602, akukho ezithakazelisayo kancane.
Kodwa ukushaya ikhadi Ternopil sika 300-hectare echibini layo manmade, elise enkabeni yedolobha. Leli chibi endala njengeBhayibheli ingasiza umuzi ngokwawo: it wadalwa ngesikhathi esifanayo njengoba nqaba. Parks and izingadi azungeze ichibi, futhi kuba ethandwa abahambahamba endaweni izakhamuzi kanye izivakashi ngokufanayo.
Abaningi abahlukene mlando, yaba ingqopha yezakhiwo kanye namasiko lungatholwa ezisemaphethelweni Ternopil sika: cishe kuzo zonke izigodi futhi yonke imizana uzokwazi iqukethe amanxiwa ezinye inqaba ephakathi, Isonto lasendulo noma wezindela. I Kremenets Castle kanye Pochayiv Lavra kukhona izindawo ethandwa kakhulu.
Ternopil yidolobha ethokomele kakhulu nokuzola. Yingakho izihambi eziningi kangaka lapha hhayi kuphela zibabaza zokungcebeleka zayo, kodwa futhi bazizwa elifudumele ngokungavamile futhi linomoya wokungenisa izihambi waleli dolobha amazing.
Isibuyekezo sokugcina:22 January 19
Faka isicelo ku-inthanethi	Ukwamukelwa Center Global	Oxhumana & Support